Ungayisebenzisa Kanjani Ifonti Awesome ku-Illustrator nezinye Izicelo | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 6, i-2021 NgoLwesibili, ngoJulayi 6, i-2021 Douglas Karr
Indodana yami ibidinga i- ikhadi lebhizinisi ngebhizinisi lakhe le-DJ nebhizinisi lokukhiqiza umculo (yebo, ucishe wayithola i-Ph.D. yakhe kwi-Math). Ukonga isikhala lapho ekhombisa zonke iziteshi zakhe zenhlalo ekhadini lakhe lebhizinisi, besifuna ukuhlinzeka ngohlu oluhlanzekile sisebenzisa izithonjana zensizakalo ngayinye. Esikhundleni sokuthenga ama-logo noma iqoqo ngalinye kusayithi lezithombe zesitoko, sasisebenzisa Ifonti Awesome.
I-Font Awesome ikunikeza izithonjana ze-vector ezingahle zenziwe ngokwezifiso masinyane - usayizi, umbala, isithunzi sokulahla, nanoma yini engenziwa ngamandla we-CSS.
Amafonti asuselwe ku-vector futhi ayashisa kuphrojekthi yakho, ngakho-ke alungele ukusetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza zedeskithophu efana ne-Illustrator noma i-Photoshop. Ungawaguqulela ngisho nasezinhlakeni futhi uwasebenzise emfanekisweni.
I-Font Awesome isetshenziswa kabanzi ukufaka lama-logo nezinye izithonjana kumawebhusayithi, kepha ungahle ungaboni ukuthi ungalanda ifonti yangempela ozoyifaka naku-Mac noma kwi-PC yakho! Ifonti ye-TrueType (ifayela le-ttf) iyingxenye yefayela le- thwebula. Faka ifonti, qala kabusha i-Illustrator futhi usuyasebenza!
Akunasidingo sokubamba ngekhanda uhlamvu ngalunye noma useshe okulungile, nansi indlela yokusebenzisa ifonti:
Vula i- Ifonti Awesome Cheatsheet esipheqululini sakho.
Vula i-Illustrator noma i-Photoshop (noma enye isoftware).
Setha ifonti ku Ifonti Awesome.
Kopisha bese unamathisela uhlamvu olusuka ku-cheatsheet luye kufayela lakho.
Yilokho kuphela okukhona kukho!
Ungayisebenzisa Kanjani Ifonti Awesome ku-Illustrator
Nayi ividiyo esheshayo yokuthi ngithola kanjani izithonjana ku-Font Awesome bese ngiyazisebenzisa ngaphakathi kwamafayela wami we-Illustrator.
Ungayisebenzisa Kanjani Ifonti Awesome nge Photoshop, Illustrator, Kanye Nezinye Izingxenyekazi Zedeskithophu.
Nasi ukubuka konke kwevidiyo okuhle kokuthi ungayisebenzisa kanjani i-Font Awesome nge-Illustrator (noma amanye amapulatifomu wedeskithophu).
Dala Izinhlaka Zamafonti Wakho Wefonti
Into eyodwa okufanele uyikhumbule ukugwema ukuyisebenzisa epulatifomu engafaki ifonti futhi edinga ukuthi ifakwe ohlelweni. Ukuyisebenzisa eZwini, ngokwesibonelo, kungadinga ukuthi umamukeli wakho alayishwe ifonti kusistimu yakhe ukuze ayibone. Ku-Illustrator noma ku-Photoshop, ungasebenzisa i-Create Outlines ukuguqula ifonti ibe yisithombe se-vector.
In Umfanekisi, ungasebenzisa i-Create Outlines ukuguqula ifonti ibe yisithombe se-vector. Ukwenza lokhu, sebenzisa ithuluzi lokukhetha bese ukhetha Uhlobo> Dala Izinhlaka. Ungasebenzisa futhi umyalo wekhibhodi Ctrl + Shift + O (Windows) noma i-Command + Shift + O (Mac).
In Izithombehop, chofoza kwesokudla kusendlalelo sombhalo. Beka igundane lakho ngaphezu kombhalo wangempela kusendlalelo sombhalo (hhayi isithonjana se- [T]) bese uchofoza kwesokudla. Ukusuka kumenyu yokuqukethwe, khetha Guqulela ku-Shape.
Landa i-Font Awesome
Ukudalulwa: Sa-oda amakhadi ebhizinisi kusuka Moo futhi sinesixhumanisi sethu sokuxhumana ngenhla.
Tags: ikhadi lebhizinisiamakhadi ebhizinisiguqula ifonti ibe uhlakaguqula ifonti ibe yimodala uhlaka lwefontidala uhlakadjukulanda ifontiukulanda ifonti kuhleifonti iyesabekaindlelauzenza kanjani izithonjana zenhlaloisithonjanai-illustratornxumalomooamakhadi we-mooIzithombehopUmkhiqiziizithombe zezokuxhumana zenhlalottfVector